सिनियरले मिठो बोले जुनियर नर्सले पनि सिक्ने हो – Health Post Nepal
सिनियरले मिठो बोले जुनियर नर्सले पनि सिक्ने हो
२०७५ फागुन १ गते १२:५५
नर्सको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनेको संख्या धेरै छ । तर, कतिपयको सोचाइ नर्सहरू संवेदनशील हुँदैनन् भन्ने पनि छ, जुन सत्य होइन । यदि अस्पतालमा कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा त्यो घटनाले नर्सलाई घर पुगिसकेपछि पनि सुत्न दिँदैन । युवा तथा बालक बिरामीको मृत्यु भएका त झन् रुनै आउँछ । कसैले घरको कमाउने सदस्य नै गुमाएको घटनाले कसलाई पो विह्वल नबनाउला र ! नर्सको प्रयास सधैँ बिरामीले राम्रो सेवा पाऊन् भन्ने नै हुन्छ । हामीले बिरामीलाई बचाउन र राम्रो स्वास्थ्य दिन यथाशक्य प्रयास गरिरहेकै हुन्छौँ ।
कतिपय बिरामीका आफन्तलाई मेरो बिरामीलाई डाक्टर तथा नर्सले नहेरेकै कारण मृत्यु भएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । बिरामीको हेरचाह गर्नु नर्सको ड्युटी मात्र होइन, धर्म हो । विशेषगरी आइसियूमा रहेका बिरामी, जहाँ बिरामीका कुरुवालाई बस्न दिने व्यवस्था छैन, त्यस्तो अवस्थामा बिरामीका आफन्तबाट नर्सले हेरचाह राम्रोसँग नगरेको गुनासा आउने गरेका छन् । तर, यो बुझाइको कमी मात्र हो । बिरामीको हेरचाहका लागि एक नर्सले आफूले सकेजति प्रयास गरेकै हुन्छ ।
नर्स पनि मान्छे हो । उनीहरूमा मानवीय संवेग हुन्छ भन्ने कुराको मनन बिरामीका कुरुवाले नगरेको पाइन्छ । बिरामी तथा उनीहरूका कुरुवाको हेराइ नर्सप्रति सम्मानजनक नहुँदा कतिपय अवस्थामा दुईबीच सामान्य भनाभनको अवस्था रहने गर्छ ।
आइसियूलगायत अन्य युनिटमा काम गर्ने नर्सले पनि पूर्ण मिहिनेतसाथ काम गरिरहेका हुन्छन् । बिरामीका कुरुवालाई नर्सका कतिपय व्यक्तिगत गतिविधिले पनि कतिपय अवस्थामा छोइरहेको हुन्छ । नर्सहरू व्यक्तिगत कारणले हाँस्दा पनि त्यसले बिरामीका आफन्तलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बिरामी तथा आफू पीडामा भएका कारण नर्सले हाँसेको, खाएका कारणले पनि रिस उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
नर्स पनि मान्छे हो । उनीहरूमा मानवीय संवेग हुन्छ भन्ने कुराको मनन बिरामीका कुरुवाले नगरेको पाइन्छ । बिरामी तथा उनीहरूका कुरुवाको हेराइ नर्सप्रति सम्मानजनक नहुँदा कतिपय अवस्थामा दुईबीच सामान्य भनाभनको अवस्था रहने गर्छ । बिरामी तथा उनीहरूका कुरुवाले नर्सको काममा विश्वास नगर्दा पनि भनाभनको अवस्था निम्तिने गरेको छ ।
कुरुवा तथा आफन्त र कतिपय अवस्थामा बिरामी स्वयम्ले पनि अस्पतलका सामान्य नियममा नबसिदिँदा र उपचारको काममै बाधा सिर्जना हुने गरी वा अस्पतालको वातावरण खलबल्याउने गरी गतिविधि गरिदिँदा सानातिना कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि बिरामीका आफन्त जतिवेला पनि बिरामीलाई भेट्न चाहन्छन् । त्यसमा नर्सले नियमानुसार नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि नर्स तथा बिरामीबीचको सम्बन्ध कतिपय अवस्थामा नराम्रो हुन पुग्छ । जथाभावी र जतिवेला पनि बिरामीलाई भेट्न खोज्दा बिरामीलाई नै विभिन्न प्रकारका संक्रमण हुने खतराका कारण नर्सले धेरै घुइँचो बनाउन चाहँदैनन् र मिल्दैन पनि ।
नर्सहरूलाई पनि अस्पताल प्रशासन तथा उनीहरूका सिनियरको दबाब हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । घरी–घरी आउने कुरुवालाई नर्सले पटक–पटक सम्झाइरहन सक्दैनन् । बिहानको राउन्डमा आउने नर्स तथा डाक्टरले बिरामीको विशेष कुरुवालाई सूचना दिने भए पनि पछाडि आएका कुरुवालाई जानकारी नदिएको पनि हुन सक्छ । जतिपटक नयाँ कुरुवा आउँछन्, उनीहरूलाई सूचना दिनैपर्छ भन्ने भावना बिरामी कुरुवाको हुने कारण पनि नर्स तथा बिरामीबीच मनमुटावको स्थिति आउने गरेको हो ।
नर्सले गर्ने बिरामीको हेरचाह सबैखाले बिरामीका लागि उस्तै–उस्तै नै हुन् । तर, मुटुको समस्या ज्यादै संवेदनशील भएका कारण मुटुरोगीको हेरचाह गर्नु ज्यादै गाह्रो कुरा हो । उनीहरूका लागि विशेष प्रकारको हेरचाह आवश्यक हुन्छ ।
सिनियर नर्सको व्यवहार नै जुनियरका लागि सिकाइ हो । त्यसकारण विशेषगरी सिनियर नर्सलाई म भन्न चाहन्छु– बिरामीसँग मिठो बोल्ने बानी बसालौँ । त्यसैगरी, सेवाग्राहीमा पनि नर्सिङ पेसालाई सम्मानजनक रूपमा हेरिदिन आग्रह गर्छु ।
धेरै समयसम्म कुनै पनि बिरामी अस्पताल भर्ना भएर बस्दा नर्सले उसलाई खाना खुवाइदिने, कपाल कोरिदिने, ब्रस गराइदिनेलगायत सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै वेला भएको एउटा सानो गल्तीलाई इस्यु बनाएर जब बिरामीले ‘नर्स यस्ता हुन्छन्’ भन्छन्, त्यतिवेला ज्यादै नमज्जा लाग्छ ।
धेरै समयसम्म कुनै पनि बिरामी अस्पताल भर्ना भएर बस्दा नर्सले उसलाई खाना खुवाइदिने, कपाल कोरिदिने, ब्रस गराइदिनेलगायत सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै वेला भएको एउटा सानो गल्तीलाई इस्यु बनाएर जब बिरामीले ‘नर्स यस्ता हुन्छन्’ भन्छन्, त्यतिवेला ज्यादै नमज्जा लाग्छ । महिनौँ गरिएको हेरचाहलाई एकैछिनमा बिरामीले बिर्सिदिन्छ ।
हालसम्म नर्सिङ पेसाको मेरो करिब तीन दशकको अनुभवमा त्यति अप्रिय घटना भएको मलाई याद छैन । मैले भारतबाट नर्सिङ अध्ययन सम्पन्न गरेकी हुँ । मेरो जन्म नै उतै भए पनि विवाह भने नेपालमा भएका कारण मेरो कर्मथलो नेपाल बन्न पुग्यो । सुरुका एक–दुई वर्ष विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गरेपश्चात् म वि.सं. ०५६ देखि नै गंगालाल अस्पतालमा कार्यरत छु ।
नर्सिङ पेसालाई सबैले सम्मानजनक रूपमा हेर्ने दिन नेपालमा छिट्टै आओस् भन्ने मेरो चाहना छ । जसरी सेवाग्राहीले नर्सले विनम्रतापूर्वक बोलून् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन्, नर्सले पनि त्यस्तै चाहना सेवाग्राहीसँग राखेका हुन्छन् । सेवाग्राहीले नर्सका वेदना र बाध्यतालाई पनि बुझून् भन्ने चाहना हाम्रो हुन्छ ।